थाईल्याण्डमा रात बिताउन प्रस्ताव राख्दै युवतीले ‘यु वाण्ट बुम बुम?’ भनेपछि | शुभयुग
सुजन कडेलप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर १५, सोमबार (१ साल अघि)
१९८८०५ पाठक संख्या
'शरीर बेचिने शहर'
संसारका कयौं राष्ट्रहरु अहिले तिब्र भाैतिक बिकाशकाे चरणमा छन भने कयौंले सम्बृद्दिकाे बाटाे पछ्याउँदै छन।
भाैतिक पुर्वाधारहरु जस्तो पक्की सडक सञ्जाल, ठुला ठुला आवाशिय तथा व्यवसायीक भवन, बिजुली, खाने पानी, ढलनिकाशकाे उचित प्रवन्ध, शिक्षा स्वास्थ मा साधारण जनसम्मकाे पहुँच, राजनीतिक स्थीरता आदिले हरेक देशकाे बिकाशमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ।
बिकशित देशका जनता आर्थिक रुपमा पनि सबल हुन्छन भन्ने कुरा नकार्न सकिदैन । यसले मानिसलाई स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिने अधिकारकाे सुनिश्चितता गरेकाे हुन्छ। त्यसैमा पनि राज्यस्तरबाटनै खुकुलाे नियम बनाएर एकआपसमा माया प्रेम साटासाट गर्नु र खुला रुपमा याेनजन्य गतिविधि गर्ने निति अवलम्बन गर्दा कम आयस्तर भएका युवायुवतीहरुले साे नितिकाे उपयाेग गरेर धन आर्जनकाे बाटाे लिन सकेका छन।
नेशनल लाईफ ईन्स्याेरेन्स कं लिं काे बरिस्ठ अभिकर्ताको हैसियतले केही समय पहिले थाईल्याण्डकाे एक हप्ता भ्रमण गर्ने अवसर जुटेकाे थियाे।
मनमा अनेक उत्साह र उमँग बाेकेर भ्रमणमा निस्केको हामी करिब तीस जना एक अर्कामा परिचय गर्दै अघि बढेका थियौँ । नेपाल बायुसेवा निगमकाे प्लेनमा पाईलट बिजय लामा सँगकाे यात्रा बास्तबमा राेमाञ्चक थियाे।
नयाँ नयाँ स्थान, परिबेश, अनेकौं घटना घटेकाे स्थल, मठ मन्दिर तथा आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रकाे भ्रमण गर्ने र विशेष सामुन्द्रिक खानाकाे परिकार हाम्राे यात्राको मुख्य उद्देश्य थियाे। राजधानी बैंकक बाट बसमा पटाया शहर सम्म पुग्दा बाटामा देखिएका दृश्यले मनमा राैनकता थपेकाे थियाे।
पहिलाे दिन आराम गर्दै तालिका अनुसार हामी यत्रतत्र डुल्न अग्रसर भयाै। पटायाकाे रात्रीकालिन जीवनकाे अनुभव गर्न हामी तीन जना साथीहरु एउटा समूह बनाएर निस्कियाै। “वाकिङ स्ट्रिट” भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा खुल्ला रुपमा अर्धनग्न भएर नाचिरहेका युवतीहरुले हामीलाई आकर्शित गरे ।
उक्त स्थानमा करिब दुई घण्टा हरायाैं। कल्पना गरिएको भन्दा फरक ढंगबाट युवती ले आफ्नाे प्रस्तुति देखाउदा सबैजना छक्क पर्याैं। नाचगान, बाेली, शारीरिक हाउभाउ र व्यवहारबाट सबै प्रभावित थिय। त्यहाकाे गतिविधि नियाल्दा हरेक युवतीकाे खुवि र क्षमताकाे प्रशंसा गर्दै उक्त क्षेत्रबाट बाहिर निस्क्यों।
जब हामी हाेटलमा जानका लागि सवारीसाधन काे प्रतिक्षामा बाटाे छेउमा उभिएर बसेका थियौँ । त्यस बेलाकाे एक घटना अझै ताजा छ ।
एक अर्धबैसे उमेरकी महिला हामी नजिक आउदै सँगै रात बिताउन प्रस्ताव राख्दै भनिन :- ” यु वाण्ट बुम बुम??” हामी एकछिन केही बाेलेनाै तर उनी हामी तिर अग्रसर भएकाे देख्दा उनीसँग बाेल्न गयाैं। एउटा साथीले भन्याे :- ” हाउ मच???” महिलाले भनिन :- ” जस्ट 1500 भाट। ” हामीले महंगो भयाे भन्ने आशय व्यक्त गरेपछी महिला ले तीन जना मिलेर लैजाउ तीन जनानै मिलेर पैसा तिर र तीन जना नै मिलेर आफ्नाे शारीरिक प्यास मेटाउ भनिन। उनकाे प्रस्ताव लाई सधन्यवाद अस्वीकार गर्दै हामी हाेटल तर्फ अघि बढ्यौं ।
हाम्राे समाजले कुनै पनि युवायुवती बिचकाे प्रेम सम्बन्ध लाई सहज रुपमा स्वीकार्न सक्दैन। प्रेम सम्बन्ध लाई एक किसिमको अक्षम्य पापकाे रुपमा लिईन्छ। यसले बर्तमानमा हित गरेपनि कालान्तरमा अनेकौं किसिमको घटना निम्त्याउने खतरा हुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा मायाकाे भाव व्यक्त गर्न सक्ने बाताबरणको सिर्जना हुनु पर्दछ।
धेरै खाेजिएकाे र कम व्यक्त गरिएको सम्बन्धकाे कुरालाई स्पष्ट रुपमा बुझ्ने र उपयोग गर्ने अधिकारकाे सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । देश संवृद्द बनाउन प्रयाेग गरिएको थाईल्याण्डकाे पर्यटक आकर्शित गर्ने तरिका लाई अवलम्बन गरि हामी पनि एक सुसज्जित र अनुशासित राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छाै।।